प्रचण्डकाद्वारा अाइतबार १० सभालार्इ सम्बाेधन, कहाँ के भने ? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रचण्डकाद्वारा अाइतबार १० सभालार्इ सम्बाेधन, कहाँ के भने ?
भरतपुर, कात्तिक २६ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले गएको स्थानीय तहको चुनावमा भरतपुर वडा नं. १९ मा भएको घटना इतिहासककै दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन । साथै प्रचण्डले उक्त घटनाबाट शिक्षा लिदै त्यस्ता घटना अव दोहोरिन दिनु नहुने बताए ।
चुनावी अभियानका क्रममा आइतबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं चितवन क्षेत्र नं ३ का उम्मेद्वार प्रचण्डले भरतपुर महानगरका १५, १६ र १९ नम्वर वडामा आयोजित दस वटा कोण सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो।
अभियानका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले जनतासँग अन्तरक्रिया गर्नुका साथै स्थानीय जनताका समस्याबारे चासो राख्नु भएको थियो। अभियानमा माओवादी नेता अमिक शेरचन, क्षेत्र नं. ३ (क) का उम्मेद्वार कृष्ण भूर्तेल, एमाले नेता देवी ज्ञवाली लगायतका नेताहरुको उपस्थिति रह्यो।
कार्यक्रम १, मंगलपुर
आइतबार बिहानै अध्यक्ष प्रचण्डले भरतपुर १६ को मंगलपुरमा आयोजित चुनावी कोणसभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले दस वर्ष विचार निर्माण, दस वर्ष जनयुद्ध र दस वर्ष शान्ति प्रकियामा बितेको भन्दै अबको दस वर्ष विकास र समृद्धिमा लगाउने धारणा राख्नु भयो।
याे पनि पढ्नुस जनकपुरमा बिहान मधेसका मुश्लिम जनतासंग चियागफ गर्दै प्रचण्ड
कार्यक्रम २, फूर्तिचोक
दोस्रो कार्यक्रमका रुपमा प्रचण्डले भरतपुर(१६ को फूर्तिचोकमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रचण्डले विचार मिलेका कारण एमाले-माओवादी बीच पार्टी एकता हुन लागेको बताउनु भयो।
कार्यक्रम ३, शरणपुर
आइतबारको तेस्रो कार्यक्रमका रुपमा प्रचण्डले शरणपुरका जनतालाई सम्बोधन गर्नुभयो। घरदैलो अभियानका क्रममा प्रचण्डले जनताका समस्या, विकास निर्माणको अवस्था लगायतका विषयमा अन्तरक्रिया र अवलोकन गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रम ४, शिवघाट
चुनावी अभियानमा प्रचण्डले जनतालाई अभिवादन गर्दै शिवघाट क्षेत्रमा घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्नुभयो। घरदैलोका क्रममा प्रचण्डले भन्नुभयो, चितवनको विकासमा मेरो जोड छ। चुनावपछि बलियो बामपन्थी सरकार बन्छ। त्यस अवधिमा मैले चितवनका सबै कच्ची सडकहरु कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएको छु। तटबन्धसहित नारायणी र राप्तिमा रिङरोड बनाइनेछ।
याे पनि पढ्नुस चितवनमा क्रियाशिल पेशाकर्मी प्रचण्ड विजयी अभियानमा
कार्यक्रम ५, विजयनगर
आइतबारको पाँचौं कार्यक्रमका रुपमा प्रचण्डले विजयनगरमा आयोजित कोण सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ूदेशका ठूला पार्टीहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। एमाले(माओवादी गठबन्धनबाट कांग्रेस आत्तिन जरुरी छैन, नेपाली कांग्रेसले पनि विचार मिल्ने शक्तिहरुसँग एकता गर्नु राम्रो हुन्छ।ू
कार्यक्रम ६, घुम्तीचोक
आइतबार नै प्रचण्डले चुनावी अभियानमा भरतपुर १५ घुम्तीचोकमा आयोजित कोण सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले अबको युग समृद्धिको युग भएको बताउँदै त्यसका लागि स्थीर सरकार निर्माण गर्न लागिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रम ७, रामपुर
सातौं कार्यक्रमका रुपमा अध्यक्ष प्रचण्डले रामपुरको कोण सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, १९ नम्वर वडा नेपालमै चर्चाको विषय बन्यो। १९ नम्वर वडामा जुन घटना घट्यो, त्यो इतिहासकै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, त्यसबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ। त्यस्ता घटना दोहोरिन दिनु हुँदैन।
याे पनि पढ्नुस प्रचण्ड चाहना– देश समृद्ध बनोस्, सबैको आँखामा खुशी छाओस्, नेपाल विश्वकै नमूना देश बनोस्
कार्यक्रम ८, शारदानगर टाउन
समृद्ध चितवन हाम्रो संकल्प हुनुपर्छ। अब विकासका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समृद्धिको प्रतिस्पर्धा जनताले चाहेका छन्ू प्रचण्डले भन्नुभयो, ूकम्युनिष्टहरुको एकताले देशमा स्थीरता दिन्छ। पार्टीहरुले विकासका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बन्छ।
कार्यक्रम ९, गुञ्जनगर
नवौं कार्यक्रमका रुपमा प्रचण्डले भरतपुर गुञ्जनगरको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा उहाँले चितवनको पूर्वाधार विकासको अवस्था नजिकबाट नियालेको बताउँदै चितवनको विकासको नेतृत्व आफूले गर्ने बताउनु भयो।
कार्यक्रम १०, रानी पोखरी
आइतबारको अन्तिम कार्यक्रमका रुपमा अध्यक्ष प्रचण्डले रानीपोखरीको कोण सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। आइतबार दिनभर अध्यक्षले स्थानीय जनतासँग अन्त्रक्रिया, विकास आयोजनाहरुको निरीक्षण गर्नुभएको थियो।
ट्याग्स: Chitwan 3, prachanda